MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA EE FLORIDA / CRACKER CUR DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noolaha ee Florida / Cracker Cur Dog iyo Sawiro
Florida Cracker Cur waa hal eey adag. Magaalada Florida, eeyani waa eey lo 'ah iyo eey doofaar ah oo loo adeegsado dhaqashada lo'da kuleylka ololaya ee kuleylaha ee shaqeeya fiidka ilaa waaga iyo wiilkiisa. Waxay leeyihiin dabeecad aad u fiican, aadna daacad ugu ah beeraha iyo shaqadooda. Inkaaraha Cracker ayaa noqday kuwo aad u yar-iyada oo luminta dhul iyo warshadii lo'da, baahida loo qabo eeyga lo'da ay hoos u dhacday. Waxaan haystaa mid aniga qudhaydu ka imid 70 jir cowboy ah. Haweeneydiisa, hooyadu, waa mid ka mid ah eeyadiisa ugu fiican sanooyinkiisa oo dhan, sidaa darteed waxaan u soo gudbinayaa sawirkan iyaga ka mid ah waa casaan iyo eey qeylinaya. Jaale aniga ahaan, laakiin taasi waa waxa ay yiraahdaan, eey qayliya .... Eeyadu waxay udhaxeeyaan 30 haween ilaa 40 rag ah. '
Eyga Lo'da Florida
Florida Cracker Cur looma abuurin muuqaal, laakiin waa awooddiisa shaqo.
Kani ma aha eey adeecsan, eey fudud. Adkaysiga iyo geesinimada looga hortagayo bisad aad u xanaaq badan, oo aad u weyn, Habaarradan waxay barteen inay noqdaan go'aan qaadasho iyo geesinimo la'aan. Caadi ahaan aamusnaanta jidka, waxay sameeyaan eeyo waardiye oo isdaba joog ah, laakiin dhab ahaantii kuma haboona magaalada hareeraheeda, halkaas oo aan jirin wax wicitaan ah oo lagu shaqeeyo. Awoodda dabagalka ayaa ku kala duwan noocyo, laakiin waxay leeyihiin san ku filan oo ay raacaan ciyaarta qaar badanna waxay qaadaan awoodda dhirtu. Khadadka qaarkood ayaa loo kariyaa eeyaha geedka iyo kuwa kale ee lagu xardho. Kulankaan aadka u adag, rakoon iyo ugaadhsade ugaadhsade ah ayaa diyaar u ah inuu wajaho mandiil cabaadyo ama xayawaan duurjoog ah oo xanaaqsan markii la xoqo. Waxay leedahay rabitaan xoog leh oo ay ku qanciso sayidkeeda. Aad loo ilaaliyo hantida iyo qoyska iyada oo aan la helin mulkiile ka awood badan naftiisa, waxay noqon kartaa mid aad u ilaaliya. Florida Cracker Cur ayaa lagu xusay geesinimadiisa. Eygan ugaarsiga ah ayaa sanka ka qaban doona dibi madaxa waalan, dhulkiisana wuxuu ku hayaa xitaa orso markii loo hanjabo. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah in lagu gaaro xaaladda hoggaamiye xirmo. Waa dareen dabiici ah eeyga inuu amar ku haysto xirmadiisa. Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Bini'aadamku waa inuu noqdaa kuwa go'aaminaya, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran.
tan iyo bulxan puppy puppy
Florida Cracker Cur laguma talinayo nolosha guriga. Waxaa loo kariyaa shaqada waxayna ugu faraxsanaan doontaa shaqo la qabto.
Marka aysan ka maqnayn shaqo, noocani wuxuu u baahan yahay in la qaato maalin kasta socod dheer ama orod.
Qiyaastii 12 ilaa 16 sano
Qiyaastii 3 ilaa 8 eyyo
Timaha gaagaaban ee Curkan waa fududahay in la xafido. Mararka qaarkood shanlee oo cadayo si aad uga saarto timaha dhintay iyo kuwa dabacsan. Maydho oo keliya markii loo baahdo maadaama maydhashadu qallajin karto maqaarka, taasoo sababi karta dhibaatooyin maqaarka ah. Ka ilaali kanaalka dhegta timo xad dhaaf ah ciddiyaha ciddiyahana la jaro.
Asal ahaan ka soo jeeda Florida, kani waa eey shaqeeya oo run ah. Eeyga Florida / Cracker Cur eey looma abuurin muuqaal ahaan, laakiin awooddiisa shaqo. Badanaa way ka weynaataa oo ka culus tahay lafaha kale badankood, oo loo habeeyay dhul-daaqsimeedka waxaana loo isticmaalaa sida lo'da iyo eeyaha. Waxay ushaqeysaa dhinac-dhinac-u-weheshadeeda. Qaar badan oo ka mid ah 'cowboys' ayaa sheegaya, 'Cowdog si fiican loo tababaray waxay u qalantaa shaqada dhowr rag ah.' Eydii ugu horreysay ee kayd ah ayaa waxaa keenay Florida Hernando de Soto sanadkii 1539. Eeyahaas waxaa loo isticmaali jiray in lo'da lagu soo ururiyo. Marki ay lo’da baxsatay, eyda shaqadiisu waxay ahayd inuu lo’da gadaal isugu geeyo oo dib ula raro iyada iyo inta kale ee lo’da ah. Eeyaha qaar ayaa sac ku qaban jiray sanka, dhegta ama lugta ilaa sac sac la xariiqo oo la calaamadeeyo kuwan waxaa loogu yeeraa 'Eyda Qabashada.' Markii eeyaha aysan ka maqnayn la shaqaynta lo'dooda, waxaa loo isticmaali jiray sida eeyaha iyo waardiyaha ee qoyska guriga. Waxay door weyn ka ciyaareen nolosha xoolaleyda.
toy dawacooyinka Terrier beagle mix
bully american vs pitbull dagaal
7 sano jir ah sarkaal oo dahab ah
sida ay u weyn yihiin eyga eskimo america
iskudhaf collie german german mix
midab buluug buluug buluug ah
i tus sawirrada godadka